Sheekada filimka Chef: Saif filimkiisa ha isku daawanin hadii aad baahan tahay waa filim xiiso leh | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Chef: Saif filimkiisa ha isku daawanin hadii aad baahan tahay waa filim xiiso leh
Sheekada filimka Chef: Saif filimkiisa ha isku daawanin hadii aad baahan tahay waa filim xiiso leh
Waxaa maanta tiyaatarada loo saaray Saif Ali Khan filimka Chef ee uu hogaamiye ka yahay waana filim sheeko ahaan laga soo min guuriyay filimka Hollywood-ka ah Chef ee sanadii 2014 la daawaday.
Horey waxaa loo daawaday filimo fariin cunto karinta lagu dhex lifaaqay kuwaas oo aad u wanaagsan sida SALAAM NAMASTE iyo CHEENI KUM, hadaba filimka Chef mala mid noqon doonaa aflaantaas oo kale?
Jilaayaasha filimkaan: Saif Ali Khan, Svar Kamble, Padmapriya Janakiraman, Chandan Roy Sanyal, Milind Soman, Dinesh P Nair, Sobhita Dhulipala, Ram Gopal Bajaj
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 13-daqiiqo
Muxuu ku wanaagsan yahay filimka Chef: Saif Ali Khan oo cadeeyay inuu filimka Chef kaga wanaagsan yahay Jon Favreau & Raghu Dixit oo asalka Hollywood-ka jileen iyo fariinta filimkaan oo qaab dhaqanka Hindiya ku saleesan loo dhigay.
Muxuu ku liitaa filimka Chef: Waxaa ka muuqato deg deg fara badan waxaana wanaagsaneyd in si wacan loo faaf reebo oo laga jaro muuqalada qaar aan loo baahneyn sidoo kalena xoogaa sheekada waxaa wanaagsaneyd in qiirada loo badiyo.
Daawo Ama Ha Daawanin: Hadii aadan daawanin Chef-ka asalka ah waad ku raaxeesan doontaa daawashada filimkaan Saif sida wacan u jilay.
Fariinta Filimka Chef Oo Kooban: Chef waa sheeko ka hadlaayo aabo wiilkiisa waqti la qaadanayo sidoo kalena ay safar wada galayaan halkaasna kasoo baxeyso fikrad ah inay furtaan goob cunto lagu kario.
Roshan Kalra (Saif Ali Khan) waa cunto kariye ku nool magaalada New York sidoo kalena ay kala tageen xaaskiisii noloshana kali ku ah waxayna u dhashay hal wiil.
Roshan Kalra (Saif Ali Khan) wiilkiisa Armaan (Svar Kamble wuxuu la noolla nool yahay hooyadiis Radha Menon (Padmapriya Janakiraman) ayagoo wada joogaan magaalada Cochin.
Roshan oo aad u mashquul badan waxaa inta badan ku adag inuu Cochin imaado sidoo kalena uu wiilkiisa waqti la qaato.
Roshan maalin wuxuu u gacan qaadaa macmiilkiisa sidaa darteed shaqada cunta karinta ayaa laa racadeenaa kadibna wuxuu fursad u helaa inuu magaalada Cochin imaado si uu wiilkiisa waqto ula qaato.
Roshan mudo marka uu wiilkiisa waqti la qaato ka hor inta uusan New York ku laabanin waxaa loo soo bandhigaa safar shaqo oo ah gaari noocyada guur guuro oo raashiinka lagu kariyo inuu cunto kariye ka noqdo waxaana gaarigaaniska leh Biju (Milind Soman).
Kadib Roshan iyo wiilkiisa safar dheer ayay soo wada galayaan ayagoo wataan gaari cuno lagu karo safarka Cochin ilaa Delhi wado walbo dadka socotada ah ayay cuno ugu karinayan ganacsigoodana wuxuu noqonaa mid hirgalo.
Kadib qeybaha xiga waxaa loo daawan doonaa sida Roshan qoyskiisa bur buray uu dib isugu soo celin lahaa iyo ganacsigiisa caqabadaha soo wajihi karaan.
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Chef: Director Raja Krishna Menon oo horey u sameeyay filimkii wacnaa Airlift markaan wuxuu doortay fariin Hollywood ah Chef balse si dhaqanka Hindiya ku saleesan ayuu u sameeyay wuxuuna ku amaanan yahay qaabka uu sheekada isugu daba riday laakiin xiisaha ugu weyn Chef wuxuu leeyahay kala bar marka la gaaro iyo safarka gaariga cunto karinta marka la galo.
Xiriirka aabo iyo wiilkiisa ka dhaxeeyo filimkaan si wacan ayaa loogu soo bandhigay waana waxa ugu weyn ee loo daawan doono waayo qaybaha hore marka Siaf New York xiiso badan malahan filimkaan.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkaan: Saif Ali Khan bandhig cajiib badan ayuu la yimid oo aan laga xiiso dhigeyn, qaabka uu u shactireenayo, sida uu murugada u matalaayo iyo muranada uu dhexda gal galaayo dhamaan si heer sare ah ayuu xidigaan u jilay.
Wiilka yar Svar Kamble jiliin cajiib badan ayuu la yimid wuxuuna leeyahay muuqaalada ugu muhiimsan filimkaan sidoo kalena qaabka uu Saif filimka u jilaayo ayaa xiiso gaar ah leh.
Padmapriya Janakiraman iyadana door wacan ayay ku leedahay waana hooyada wax walbo darteeda loo sameenayo si farxad loo siiyo.
Milind Soman ruug cadaagan door xiiso leh ayuu filimka ku leeyahay inkastoo uusan ku badneyn hadana muuqaalkiisa waa mid xiiso leh.
Gunaanad: Chef waa filim cunto karinta Saif Ali Khan si wacan ugu soo bandhigay sidaa darteed adigoo baahan ha isku daawanin ee adigoo dhargan daawo.
Filimkaan qaybtiisa dambe ayaa aad u wanaagsan waxaana waxa dadka soo jiidan doono gaar ahaan dadka reer magaalka ah, dhanka Boxoffice-ka hadal heyntiisa oo aan sareynin iyo xayeysiin balaaran oo la sameynin awgeed filimkaan fagta hore si hoose ayuu ku bilaaban doonaa.
Balse sheekadiisa oo wacan awgeed waxaa macquul ah maal maha xigaan inay reer magaalka usoo daawasho tagaan madaama sheekadiisa qiimeyn ahaan la siiayy 3.5/5 taasi oo ka dhigan inuu yahay Chef filim fariintiisa wacan tahay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Chef:
Waxaa Aqrisay 1,279
One Response to Sheekada filimka Chef: Saif filimkiisa ha isku daawanin hadii aad baahan tahay waa filim xiiso leh